Siyaasiyiinta Soomaalida ee Nairobi ku shiray ma xil doon baa mise waa xal raadis? - BBC News Somali
Siyaasiyiinta ku shiray Nairobi ayaa sheegay in loo diiday inay Muqdisho ku qabsadaan shirar siyaasadeed
"Dalkan dowlad ayuu leeyahay, ceddii wax qabsanayso waa inay codsi u soo qorataa wasaaradaha iyo hay`adaha ay quseyso, waayo ammaankooda ayaa lagu sugayaa. Iyaga ayaa doonaya inay dad isu keenaan oo wixii amni darro dhacana dowladda ku eedeeyaan, taasi suurto gal maaha." Ayay tiri.
"Madaxweynaha labo sano ayaa u harsan, laakiin raysal wasaaraha waxaan soo jeedinayaa in xilka laga qaado oo lagu beddelo qof ka karti badan oo howlaha loo igmaday qabanaya. Annagu ma nihin xukun raadis oo ma dhahayno annaga ha nalagu beddelo, ee waxaan dooneynaa in qof kale oo ka habboon lagu beddelo ." Ayuu yiri Cabdifitaax.
"Waxaa na haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii ay dawladnimadii naga burburtay ka dib in cidwalba ay isku daydo wixii ay ku heli karto saamayn, dhaqaale, ama dano kale in ay Soomaaliya farogashato, oo dadkeenu ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn in aysan dhaqaaqi karin, taasna waxay keentay in dad badan ay is dhiibaan oo shisheeye la isu dhiibo." Ayuu intaas ku sii daray madaxweynuhu.
TOOS Masar oo soo daadgureyneyso dadka ku dhaawacmay Qaza